के तपाइँ व्यापार अधिग्रहणको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ? कानूनी समर्थनको लागि सोध्नुहोस्
यदि तपाईंसँग आफ्नै कम्पनी छ भने, त्यस्तो समय आउँदछ जब तपाईं कम्पनी सञ्चालन रोक्न चाहानुहुन्छ। अर्कोतर्फ, यो पनि सम्भव छ कि तपाईं अवस्थित कम्पनी किन्न चाहनुहुन्छ। दुबै केसहरूमा, व्यवसाय अधिग्रहणले समाधान प्रदान गर्दछ।
एक्वाइर वा एक व्यापार बेच्नुहोस्?
कानूनी सहायताका लागि सोध्नुहोस्
व्यवसाय अधिग्रहण एक जटिल प्रक्रिया हो, जुन सजिलै पूरा हुनको लागि एक महिनामा एक महिना लाग्न सक्दछ। त्यसकारण अधिग्रहण सल्लाहकार नियुक्त गर्न महत्त्वपूर्ण छ, जसले तपाईंलाई सल्लाह दिन र सहयोग गर्न सक्छ, तर तपाईबाट काम लिन सक्दछ। मा विशेषज्ञहरु Law & More एक कम्पनी खरीद वा बेच्न को लागी इष्टतम रणनीति निर्धारित गर्न को लागी तपाइँ संग काम गर्दछ र तपाइँ लाई कानूनी समर्थन प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ।
व्यापार अधिग्रहण को लागी रोडम्याप
जे होस् प्रत्येक व्यवसायको अधिग्रहण फरक छ, केसको परिस्थितिमा निर्भर गर्दै, त्यहाँ एक वैश्विक रोडम्याप छ जुन तपाईले एक कम्पनी किन्न वा बेच्न चाहानुहुन्छ पछि पछ्याइन्छ। Law & More's का वकीलहरू तपाईंलाई यस चरण-देखि-चरण गाइडको प्रत्येक चरणको साथ मद्दत गर्दछ।
साझेदार / अधिवक्ता प्रबन्धन गर्दै
हाम्रो कर्पोरेट वकीलहरू तपाईंको लागि तयार छन्
हरेक कम्पनी अद्वितीय छ। त्यसकारण, तपाईं कानूनी सल्लाह प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन तपाईंको कम्पनीको लागि सीधा प्रासंगिक छ
पूर्वनिर्धारित को सूचना
के कोहीले उनीहरूका सम्झौताहरू पाइरहेको छैन? हामी रिमाइन्डरहरू र लिटिगेट पठाउन सक्दछौं
एक राम्रो बाँकी डिलिगेन्स अनुसन्धान निश्चितता प्रदान गर्दछ। हामी तपाईंलाई सहयोग गर्दछौं
के तपाइँ तपाइँको एसोसियसनको लेखहरु बाहेक तपाइँको सेयर होल्डरका लागि अलग नियम बनाउन चाहानुहुन्छ? कानूनी सहायताको लागि हामीलाई सोध्नुहोस्
"Law & More संलग्न छ
र समानुभूति गर्न सक्नुहुन्छ
यसको ग्राहकको समस्या संग ”
चरण १: अधिग्रहणको लागि तयारी गर्दै
व्यापार अधिग्रहण हुन सक्नुभन्दा पहिले यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं राम्रोसँग तयार हुनुहुन्छ। तयारी चरणमा, तपाईंको व्यक्तिगत आवश्यकताहरू र इच्छाहरू तर्जुमा गरिएको छ। यो दुबै पक्षमा लागू हुन्छ जुन एक कम्पनी बेच्न चाहान्छ कि पार्टी र कम्पनी किन्न चाहने पार्टी। सर्वप्रथम, यो निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि कुन व्यापार गतिविधिहरू कम्पनीमा संलग्न छ, कुन बजारमा कम्पनी सक्रिय छ र तपाईं कम्पनीलाई कति पैसा लिन वा तिर्न चाहानुहुन्छ। केवल जब यो स्पष्ट हुन्छ, अधिग्रहण क्रिस्टलाइज गर्न सकिन्छ। यो निर्धारण पछि, कम्पनीको कानूनी संरचना र निर्देशक (हरू) र शेयरधारक (हरू) को भूमिका अनुसन्धान गर्नै पर्दछ। यो पनि निर्धारित गर्नुपर्दछ कि अधिग्रहण एकै पटक वा बिस्तारै लिनको लागि यो वांछनीय छ कि छैन। तयारी चरणमा यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले आफूलाई भावनाहरूद्वारा डो not्याउन दिनुहुन्न, तर तपाईंले राम्रो निर्णय लिनु भएको निर्णय लिनुहुन्छ। मा वकिलहरु Law & More यस संग तपाईंलाई मद्दत गर्दछ।
चरण २: खरीददार वा कम्पनी खोजी गर्दै
एक पटक तपाईंको इच्छा स्पष्ट रूपमै म्याप आउट भएपछि, अर्को चरण भनेको उपयुक्त खरीददार खोज्नु हो। यस उद्देश्यका लागि, बेनामी कम्पनी प्रोफाइल कोर्न सकिन्छ जुन आधारमा उपयुक्त खरीददारहरू चयन गर्न सकिन्छ। जब एक गम्भीर उम्मेद्वार फेला पर्‍यो, यो सबभन्दा पहिले महत्त्वपूर्ण छ कि एक गैर-प्रकटीकरण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु। त्यस पछि कम्पनीको बारेमा सान्दर्भिक जानकारी सम्भावित खरीददारलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ। जब तपाइँ एक कम्पनी लिन चाहानुहुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ कम्पनीको बारेमा सबै सान्दर्भिक जानकारी प्राप्त गर्नुहुन्छ।
चरण:: अन्वेषण छलफल
जब सम्भावित खरिदकर्ता वा सम्भावित कम्पनी लिनको लागि फेला पर्‍यो र पार्टीहरूले एक अर्कासँग जानकारी साटासाट गरे, यो अन्वेषण छलफल सुरु गर्ने समय हो। यो प्रथागत छ कि सम्भावित खरीदार र विक्रेता मात्रै उपस्थित छैनन्, तर कुनै सल्लाहकार, फाइनान्सर र नोटरी पनि छन्।
अधिग्रहणको लागि वार्तालाप सुरू हुन्छ जब खरीददार वा विक्रेता निश्चित रूपमा रुचि राख्छ। यो सिफारिस गरिन्छ कि सम्झौताहरू एक अधिग्रहण विशेषज्ञ द्वारा गरिनु पर्छ। Law & Moreका वकिलहरु अधिग्रहण शर्तहरु र मूल्य को बारे मा तपाइँको तर्फ बाट बातचीत गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटक दुई पक्षहरु बीच सम्झौता भएको छ, आशय पत्र लिन्छ। आशयको यस पत्रमा, अधिग्रहणको शर्त र सर्तहरू र वित्तपोषणको व्यवस्था गरिएको छ।
चरण:: व्यापार अधिग्रहणको पूर्णता
अन्तिम खरीद सम्झौता बनाउनु अघि, एक उचित लगन अनुसन्धान गरिनु पर्छ। यस परिश्रमका साथ कम्पनीको सबै डाटाको शुद्धता र पूर्णता जाँच गरियो। परिश्रम गर्नुपर्ने महत्त्वको महत्त्व छ। यदि देय लगनले अनियमिततामा परिणाम दिँदैन भने, अन्तिम खरीद सम्झौता तान्न सकिन्छ। नोटरी द्वारा स्वामित्व हस्तान्तरण रेकर्ड गरिसकेपछि सेयरहरू स्थानान्तरण गरिएको छ र खरीद मूल्य तिरेको छ, कम्पनीको अधिग्रहण पूरा भयो।
विक्रेताको संलग्नता प्रायः समाप्त हुँदैन जब व्यवसाय स्थानान्तरण हुन्छ। यो प्रायः सहमत हुन्छ कि विक्रेताले उसको उत्तराधिकारी परिचय गराउँदछ र उसलाई कामको लागि तयार गर्दछ। कार्यान्वयनको यस अवधिको अवधि वार्ताको क्रममा अगाडि छलफल गरिएको हुनुपर्दछ।
एक व्यवसाय अधिग्रहण को वित्त गर्न को लागी धेरै तरिकाहरु छन्, जस मध्ये प्रत्येकको आफ्नै फाइदा र बेफाइदाहरु छन्। यी वित्त पोषण सम्भावनाहरु लाई पनि मिल्दछ। तपाईले व्यवसाय सम्बन्धी वित्तपोषणका लागि निम्न विकल्पहरू विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
खरीददारको स्वामित्व कोष
यो अनुसन्धान गर्न महत्वपूर्ण छ कि तपाईंको आफ्नो पैसाको तपाईं कती गर्न सक्नुहुन्छ वा कम्पनी अधिग्रहण अघि यो योगदान गर्न चाहनुहुन्छ। अभ्यासमा, यो तपाइँको आफ्नै सम्पत्तिको कुनै इनपुट बिना व्यवसाय अधिग्रहण पूरा गर्न प्राय: धेरै गाह्रो हुन्छ। यद्यपि तपाईंको आफ्नै योगदानको मात्रा तपाईंको अवस्थामा निर्भर गर्दछ।
अभ्यासमा, एक व्यवसाय अधिग्रहण पनि अक्सर विक्रेता द्वारा वित्तपोषण गरिन्छ उत्तराधिकारीलाई loanणको रूपमा आंशिक वित्त पोषण प्रदान गर्दै। यसलाई विक्रेता asण पनि भनिन्छ। विक्रेता द्वारा वित्त पोषित हिस्सा प्राय: क्रेताले आफै योगदान गरेको भाग भन्दा ठूलो हुँदैन। थप रूपमा, यो भुक्तानी किस्ताहरूमा गरिने छ कि नियमित रूपमा सहमत छ। एक विक्रेता loanण मा सहमत भएको छ जब एक agreementण सम्झौता तैयार गरीन्छ।
यो पनि सम्भव छ कि खरिदकर्ताले कम्पनीमा सेयरहरू बिस्तारै चरणमा बिक्री गर्न सक्दछन्। यसका लागि आय कमाउने व्यवस्था छनौट गर्न सकिन्छ। एक अर्जित-आउट व्यवस्था को मामला मा, भुक्तान एक निश्चित परिणाम हासिल क्रेता मा निर्भर गर्दछ। यद्यपि एक ब्यापार टेकओभरको लागि यो व्यवस्थाले विवादको स्थितिमा ठूलो जोखिम समावेश गर्दछ, किनकि खरिदकर्ताले कम्पनीका नतीजाहरूमा प्रभाव पार्न सक्दछ। विक्रेता को लागी एक लाभ, अर्कोतर्फ, धेरै भुक्तानी हुन सक्छ जब धेरै नाफा कमाईन्छ। कुनै पनि घटनामा, यो बिक्री, खरीद र फिर्ता एक स्वतन्त्र अनुगमन छ एक आय-आउट योजना अन्तर्गत बुद्धिमानी हो।
(मा) औपचारिक लगानीकर्ता
वित्तीय अनौपचारिक वा औपचारिक लगानीकर्ताहरूबाट fromणको रूपमा लिन सक्दछ। अनौपचारिक लगानीकर्ता साथी, परिवार र परिचित हुन्छन्। त्यस्ता loansणहरू पारिवारिक व्यवसायको अधिग्रहणमा सामान्य हुन्छन्। यद्यपि यो अनौपचारिक लगानीकर्ताहरूको लगानी ठीकसँग रेकर्ड गर्न महत्त्वपूर्ण छ ताकि परिवारका सदस्यहरू वा साथीहरू बीच कुनै गलतफहमी वा विवाद उत्पन्न नहोस्।
थप रूपमा, औपचारिक लगानीकर्ताहरू द्वारा वित्तिय सम्भव छ। यी पार्टीहरू हुन् जसले aणको माध्यमबाट इक्विटी प्रदान गर्छन्। क्रेताका लागि हानि हो कि औपचारिक लगानीकर्ताहरू पनि प्रायः कम्पनीको शेयरधारक हुन्छन् जसले उनीहरूलाई नियन्त्रणको निश्चित मात्रा दिन्छ। अर्कोतर्फ, औपचारिक लगानीकर्ताहरूले प्राय: ठूलो नेटवर्क र बजारको ज्ञान योगदान गर्न सक्दछन्।
एक वित्त पोषण विधि जुन लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ क्राउडफन्डि is। छोटकरीमा, क्राउडफन्डि means भनेको अनलाईन अभियानको माध्यमबाट ठूलो स number्ख्यामा मानिसहरूलाई तपाइँको अधिग्रहणमा पैसा लगानी गर्न आग्रह गरिन्छ। भीडफंडि ofको एक हानि, तथापि, गोपनीयता हो; क्राउडफन्डि realize महसुस गर्नका लागि तपाईले अग्रिम घोषणा गर्नु पर्छ कि कम्पनी बिक्रीको लागि हो।
Law & More तपाईंलाई व्यवसाय अधिग्रहणको वित्त पोषण सम्भावनाहरू अन्वेषण गर्न सहयोग गर्दछ। हाम्रो वकिलहरु तपाईको परिस्थिति अनुरुप संभावनाहरु मा सल्लाह दिन र वित्त को व्यवस्था गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
हामीलाई फोन गरेर सम्पर्क गर्नुहोस् +१ 31० 40० 369 06 80 XNUMX० स्टुउर ईन ई मेल मेल:
श्री। अधिकतम Hodak, अधिवक्ता र अधिक - maxim.hodak@lawandmore.nl